यो अक्सर फैशन केटी को पछि लाग्नुलाई मा त अन्त तिनीहरूले सुरक्षित गर्न केही छ जस्तो देखिन्छ जो उनको कपाल, बिगार्छ कि हुन्छ। धेरै यो समस्या समाधान र आफ्नो लामो ताले shaved, तर यो अवस्था को बाहिर प्रभावकारी तरिका छैन। यदि आधुनिक सुविधाहरु समस्या सामना गर्न सक्दैन र तपाईं hairdresser गर्न फेरि र फेरि छ तपाईं के गर्नुहुन्छ? उत्पादन प्रयोग हुनेछ keratin को। Keratin - प्राकृतिक छ र कपाल सहित केही संरचना, मा छ कि एक प्रोटीन। उहाँले तिनीहरूलाई बलियो र स्वस्थ बनाउँछ कि।
तपाईं keratin बारेमा जान्नु आवश्यक छ के?
Keratin - एक समूह श्रेय गर्न सकिन्छ कि एक कार्बोहाइड्रेट fibrous प्रोटीन। यो मात्र आफ्नो विशेषता chitin मा उपज गर्न सक्ने त टिकाउ छ। ठोस, हाम्रो नङहरु, hooves र स्तनधारी, porcupine सुई र नरम को सीङ, मानव बाल र पशु कपाल को भाग हो जो छ जो: Keratin पारंपरिक दुई प्रकार विभाजन गरिएको छ। एक रोचक तथ्य हाम्रो शरीर कपाल र नङ मा मरेको keratin कक्षहरू नयाँ सतह मा धक्का छन् जो को गठन गर्दै छ। यो cysteine र cystine comprises रूपमा स्थायित्व, एमिनो एसिड समावेश keratin सल्फर प्रदान गर्दछ।
Keratin द्रुत पुनर्स्थापना लागि अनुमति दिन्छ र हाम्रो कपाल जोगाउन। यो बिना, तिनीहरूले त चिल्लो र सुन्दर हेर्न छैन। को keratin, समीक्षा यसको प्रभावकारिता कुन बिन्दु को, बाल उपचार गर्न विश्वव्यापी प्रयोग गरिन्छ किन छ।
कपाल को हेरविचार लागि keratin उत्पादनहरु के थपियो?
विभिन्न balms, मास्क र शैंपू को निर्माता अक्सर keratin को उत्पादन थपिएका छन्, तर यो चाँडै मा भित्र पस्नु लागि क्रममा केश संरचना, यो एक आणविक स्तरमा milled छ, परिमार्जन गरिएको छ। राम्ररी काम गर्न keratin संग मुखौटा, आफ्नो संविधान आवश्यक क्रसटेशियन, चरा पंख या पशु फर को गोले देखि झिकिएको छ कि प्रोटिन समावेश छ। प्रभावकारी बाल keratin दुरुस्त गर्न, यो एक विशेष तरिकामा उपचार गरिएको छ। यो एक सस्तो खुशी छैन किनकी, र keratin संग हालतमा reasonably उच्च मूल्य हो। आफ्नो औसत मूल्य प्रति 100 एमएल 350 rubles देखि सुरु हुन्छ। एक मास्क वा विशेष कस्मेटिक अलिकति सस्ता राल बनाउन, तिनीहरूले एउटा कृत्रिम पदार्थ थप्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। कृत्रिम keratin - एक उत्पादन प्राकृतिक एक हदसम्म समान छ, तर धेरै मात्र होइन लाभ, तर हानि ल्याउन सक्छन् जो। तसर्थ, बजेट खरीद अघि ध्यान लाग्छ।
keratin को मद्दतले ख्याल
हाम्रो कपाल 97% यो सामाग्री किन तिनीहरूलाई लागि त राम्रो छ, जो छ, keratin बनेको छ। दुर्भाग्यवश, हाम्रो शरीर मद्दत बिना बाल को पूर्ण टाउको सिद्ध र स्वस्थ हेर्न अनुमति दिन्छ जो keratin को राशि, synthesize गर्न सक्दैन। त्यसैले, तपाईं चाहनुहुन्छ भने आफ्नो कर्ल उहाँलाई keratin सिर्जना गर्न मद्दत गर्न, हालन प्रशंसा आकर्षित। तपाईंलाई एउटा विशेष प्रोटिन आहार मा बस्न वा बाह्य शक्तिको keratin प्रयोग भने यो, गर्न सकिन्छ। Keratin संग उपचार कपाल बलियो र denser बनाउने, तपाईं चाँडै र सजिलै विभाजन समाप्त निको गर्न अनुमति दिन्छ। यस्तो हेरविचार सर्वश्रेष्ठ बिछाउने Strand उजागर भएपछि राम्रो मात्रा फरक-फरक हुन्छ। आज तपाईं प्रोटिनको खोपडी र बाल संरचना saturate गर्न अनुमति धेरै प्रक्रियाहरु छन्। तपाईं के चयन, शीघ्र पेशेवर।
एक तरल keratin के हो? यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ?
Keratin - एक BIOPOLYMER सामाग्री, विशिष्ट एमिनो एसिड cysteine आधारमा। तर keratin किनभने के अक्सर छैन कपाल संरचना मा पूर्ण भित्र पस्नु र पूर्ण यसलाई भर्नका गर्न सक्छन्, पर्याप्त ठूलो आकार अलग छ। कपाल को हेरविचार लागि विशेष उत्पादनहरु को निर्माताहरु किन तरल keratin घोडा प्रयोग छ। यो के हो? यो चाँडै यसलाई पोषण र पुन: एक राम्रो काम बनाउने, गहिरो प्रत्येक बाल मा penetrates जो पदार्थ। उहाँले चाँडै पनि सानो चर्किएको, gluing सुझाव भरिन्छ र किसिमहरु बलियो बनाउँछ।
धेरै अध्ययन पनि सुक्खा र पातलो कपाल तरल keratin सर्वश्रेष्ठ बालिका कि देखाएका छन्। चमकदार र बलियो बनाउन, आफ्नो संरचना सुधार गर्न यो प्रयोग गर्नुहोस्। तेल कपाल को लागि, उहाँले किनभने बोसो केश keratin मा गहिरो भित्र पस्नु छैन, लगभग बेकारी छ। तपाईं अक्सर बाल रंग वा तरल keratin ठीक सर्वश्रेष्ठ तपाईं सुहाउने उपकरण हुँदा, दैनिक स्टाइल बनाउन भने।
keratin संग धन: समीक्षा
तपाईं आफ्नो कपाल सधैं सही देख्यो चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं हावा कंडीशनर र प्रयोग गर्नुपर्छ keratin संग शैंपू। तिनीहरूले पूर्णतया हो कि मुख्य कुरा तपाईं फिट। तसर्थ, खरिद गर्नु अघि यो सबै भन्दा राम्रो एक स्टाइलिस्ट परामर्श छ। को प्रोटिन गर्न धन को सबै भन्दा आधुनिक cosmetology मा निको छन् भन्ने तथ्यलाई बावजुद फेला र दैनिक प्रयोगको लागि प्रयोग ती गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, ग्राहकबाट राम्रो प्रतिक्रिया को धेरै को शैम्पू कम्पनी Keune "Keratin महीन शैम्पू", जो तपाईं कपाल चमकदार र चिल्लो गर्न अनुमति दिन्छ थियो। यसको औसत लागत बारे मा $ 20 छ। कुनै कम उपभोक्ता धारणा प्रभावकारी माध्यम Cutinol "Rebirth" बाट shamput छ। यो पनि keratin समावेश आधारित छ जो मास्क, यसलाई सँगै किन्न सर्वश्रेष्ठ छ। औसत मूल्य प्रति सेट - बारे 16-17 यूरो। समीक्षा रूपमा, keratin संग एक दैनिक हालतमा त्यहाँ अब र कमजोर छन् हुनत, जस्तै उपचार रूपमा प्रभावकारी छन्। शैंपू मा, मास्क र kontsidionerah keratin खुराक धेरै पटक सानो छ, तर तिनीहरूले क्षतिग्रस्त कपाल एक उत्कृष्ट काम गर्छन।
को keratin कसरी सीधा छ?
राम्रो धुन गर्नुपर्छ प्रक्रिया सुरु र सुक्खा बाल हेयर ड्रायर को लम्बाइ मार्फत शैम्पू अघि। त्यसपछि यो चिकित्सकीय संरचना लागू गर्न सम्भव छ। 30-40 मिनेट पछि Strand फेरि hairdryer सुकेको र छाप राम्रो keratin गर्न, तिनीहरूले थप 230 डिग्री को एक तापमान मा utjuzhkom मिलेका छन्। त्यसपछि फेरि आफ्नो कपाल धुन। यो प्रक्रिया पछि, 72 घण्टा भित्र तपाईं आफ्नो बाल धुन सक्नुहुन्न। keratin मार्फत मर्मत प्रक्रिया बारे 2-3 घण्टा विस्तार। बाल बारेमा छ महिना लागि सीधा, चमकदार र चिल्लो हेर्नेछौं, त्यसपछि प्रभाव बिस्तारै हराएको छ। यो उपचार कपाल पनि अनाज्ञाकारी र राम्रो स्वास्थ्य छैन गर्नेहरूका लागि उपयुक्त छ।
कसरी keratin सीधा लागि प्रक्रिया गर्छ?
यसको प्रभावकारिता गर्न दर्शाउन समीक्षा जो Keratin, प्रक्रिया को एक प्रमुख घटक छ। पनि समावेश कपाल को संरचना गर्न accede सकेन जो formaldehyde मुक्त keratin छन्। यो प्रक्रिया गर्भवती महिला लागि सिफारिस गरिएको छैन, किनभने formaldehyde को छ र स्तन-खुवाउने बच्चाहरु भएकाहरूलाई।
तरल Keratin घर
निस्सन्देह, तपाईंले एक, सुन्दर मोटा र स्वस्थ कपाल प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं स्टाइलिस्ट जान हरेक समय आवश्यक छैन। Keratin एकदम प्रयोग र घर मा गर्न सजिलो हुन सक्छ। यो सिर्फ तपाईं सबै भन्दा राम्रो किन्न यो प्रोटिन के मतलब बारेमा hairdresser संग परामर्श गर्न, र निर्देशन अनुसार यसलाई प्रयोग लायक छ। तरल Keratin अब एक शैंपू वा कंडीशनर को रूप मा, तर पनि दाना मा मात्र होइन उत्पादन। त्यहाँ एक स्प्रे को रूप मा उपकरण हो। तिनीहरूले लागू गर्न एकदम सजिलो छन्। यस मामला मा, यी धन आफ्नो बाल हानि छैन, तिनीहरूलाई स्थापना अघि स्थायी प्रयोगको लागि स्वस्थ र थप सुन्दर र उपयुक्त बनाउन।
शैम्पू "खाली Vita अबे" (खाली Vita अबे) विरोधी dandruff: समीक्षा
तातो बाल कैंची: सुविधाहरू haircuts
दुई दीपक मा2स्थानहरूको ताराहरु रेखाचित्र: स्विच सञ्चार
भित्री हुक्का: व्यवस्था सुझावहरूको
देवू Leganza कार